Tsaho momba ny fahitalavitra Apple | Avy amin'ny mac aho
Miverina miaraka amin'ny tsaho momba ny Apple TV vaovao
Apple nampidina ny vidin'ny Apple TV ankehitriny tamin'ny hetsika manokana "Spring Forward" ho an'ny Apple Watch sy ny MacBook vaovao, izay mamoaka honohono indray momba ny Apple TV vaovao mety ho an'ny lahateny fototra manaraka. Haino aman-jery sasany miresaka momba ny WWDC manaraka amin'ny Jona 2015 ho an'ny fandefasana an'ity Apple TV vaovao ity ary ny sasany kosa maminavina azy io kelikely, raha toa ka mety hisy indray ny tsaho momba ny fitaovana fandraisam-bahiny kely an'i Apple.
Amin'ity indray mitoraka ity dia miompana amin'ny antsipiriany dimy manokana ny tsaho, ny vaovao Processeur A8, Siri, Ilay nandrasana fivarotana app, fahatsiarovana 8GB ary vaovao mikasika fanaraha-maso lavitra. Tamin'ny voalohany ny tsaho momba ny fanaraha-maso lavitra dia hitako fa kely loatra satria misy resaka famolavolana vera ary mampidi-doza tokoa izany raha jerena ny isan'ny fotoana andatsahantsika azy ireo amin'ny tany ...
Ny marina dia maro ireo mpampiasa no manohy mieritreritra fa tsy maintsy havaozin'i Apple ity fitaovana ity amin'ny alàlan'ny fampidirana ny magazay fampiharana azy ary amin'ny zavatra hafa kely. Ny tena fanovana ny famolavolana ny Apple TV amin'izao fotoana izao dia tsy zavatra mampatahotra antsika loatra, na dia marina aza izany asio fahatsiarovana kely kokoa ary ovao ny processeur miankina aminao.
Amin'ny sisa amin'ity tsaho ity, Tsy hitako hoe mila manampy an'i Siri koa mankany amin'ny Apple TV na manana fanaraha-maso lavitra miaraka amina endrika fitaratra izay hianjera amin'ny tany mora foana miaraka amin'ny loza azo antoka, fa raha afaka manatsara ny lafin-javatra sasany amin'ireo fitaovana anatiny ianao mba hahafahan-tsiranoka kokoa ary hahavita kely kokoa. Ho fanampin'ity olana ity izay misy ifandraisany amin'ny Apple mivantana, tsara raha toa ka atolotra indray mandeha fotsiny ho an'ny mpampiasa rehetra mipetraka ivelan'ny Etazonia ny atiny, satria tena io no tadiavin'ny maro amintsika, ny manolotra tolotra malalaka sy miaraka amin'ny vidiny mirary hijerena ireo andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika ankafizinay miaraka amin'ny famandrihana manana vidiny mirary.
Mazava ho azy, mpampiasa maro no hanova ny fanatsarana ny fivoarana estetika na ao anaty fitaovana vaovao, ho an'ny fandaharana tsara azo amin'ny alàlan'ny famandrihana karama. Manantena isika fa ho tonga tsikelikely ny fantsona bebe kokoa noho ny ananantsika androany ao amin'ity fitaovana ity, izay Na dia marina aza dia mandeha tsara toy ny AirPlay hijerena sary sy horonan-tsary amin'ny fahitalavitra, Tsy manana chicha be dia be ao amin'ireo fantsona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Miverina miaraka amin'ny tsaho momba ny Apple TV vaovao
salama, manana fanontaniana aho, miaraka amin'ny apple tv amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mijery sarimihetsika amin'ny endrika avi na mpeg avy amin'ny solosaina birao mankany amin'ny fahitalavitra, amin'ny alàlan'ny airplay ohatra ?. Sa azo atao ihany ny mahita sary?
Fanohanana ny Boot Camp ho an'ny fiafaran'ny Windows 7
Gym miafina an'i Apple ho an'ny Apple Watch